Umthetho wenxephezelo usebenza yonke indawo. Unomyeni ofanelekayo? Kodwa phakathi kwezihlobo zakhe ngokuqinisekile kukhona umuntu ongeke akwazi ukuqala ubudlelwane naye. Futhi ngokuvamile kuvame ukuthi lokhu kungunina. Kodwa-ke, lo mama ohlonishwa kakhulu, futhi, ngokusobala akahlali kahle kakhulu ehlala eduze kwakho. Uma kungenjalo, bekungeke kube nokulandela inqubomgomo yokubhekana nokuphikisana kahle "empini ebandayo". Kodwa ingabe akukho ndawo ngempela yokuqonda nokuhlonipha kulesi sivunguvungu?
Futhi asivikelekile ekuhlotsheni komndeni okuphikisanayo, okunzima futhi okunzima? Ubudlelwano phakathi kwezihlobo eziseduze kuyisihloko esibalulekile sosuku namuhla.
Hhayi, h, kodwa ngenye indlela, ngokusobala, ngeke kusebenze - ngokusobala sizithola sihilelekile kule mpikiswano yabababa nezingane, umalokazana noninazala ... Kodwa kanjani enye? Uma sikhathazeke kakhulu ngekusasa lamaqhawe wezingqungquthele zethelevishini, umakoti wendodana uqobo nje uyinhloko engapheliyo yokuhlangenwe nakho okungapheli, izinyembezi, iziprofetho kanye nezingxabano. Izibalo ziyadabukisa: imibhangqwana engaphezu kwezingu-60% ihlukana ngaphandle kokuthatha umamazala, umkhwekazi, wakhiwa futhi uyathembeka, kodwa-ke, omama abaholayo. Umama womkhwenyana nomama womakoti, okungukuthi, umkhwekazi noninazala. Bafaka lezi zephesenti phakathi kwegazi labo nokuthi "lokhu" noma "lokhu", abavela ngaphandle bephethe i-charter ehlukile "esitokisini" esithule futhi esiphelile.
Kukhona imindeni ejabulayo lapho izihlobo zabashadile, ngisho noma bengathandi kakhulu "indodakazi" noma "indodana" etholakalayo, ziyahlonishwa futhi zicatshangwa ngombono wazo. Ngokuyisisekelo, lokhu kuwanele, kepha kanjani ukufika kulo mlinganiso? Sibheke njalo ukuhlakanipha nobulungisa kulabo asebekhulile. Izazi zengqondo ziqinisekile: kulawo mindeni lapho umamazala omusha angangena ebuhlotsheni bendodana yakhe nobulili obuhlukile kusukela ekuqaleni, kodwa aphishekela inqubomgomo yokubona okubucayi, azikho izinyathelo eziyingozi, izingxabano ezimbi kanye nezingxabano emva kwalokho. Futhi hhayi kuphela ngoba omama abahlakaniphile nangemva komshado wezingane zabo bahlala "bengenandaba" nokuphila kwabo, kodwa ngenxa yokuthi baqondisa izenzo zabo ezinganeni ngendlela efanele. Ngithandana, isibonelo, ngendodana engentombazane engafanelanga abazali bayo kunoma yiziphi izikhundla. Futhi uthini umama othungayo? Awuqali umzabalazo ovulekile - kulokhu akuyona nje engenamsebenzi, kodwa futhi kuyingozi: umoya wokuvukela uzovusa indodana, uzokwenza konke okuphambene nezifiso nezintshisekelo zabazali, futhi isimo sizophuma ekulawuleni kwabo. Umzali okhangele phambili, ngaphezu kwakho konke, uzama ukukhuluma ngokuthula nendodana yakhe futhi athole izinhlelo zakhe. Futhi ngesikhathi esifanayo uveza kahle umbono wakho kulokhu. Kunezinketho ezimbili kuphela zokuthuthukiswa kwemicimbi eqhubekayo: noma indodana izohlanganyela ngezinkolelo zikamama, noma ngeke ivumelane. Futhi-ke kubalulekile ukuqonda ukuthi akusizi ngalutho ukuqhubeka silwa, kuzodingeka sibone ngokukhetha kwakhe kanye nengxenye yakhe yesibili. Ufuna injabulo yengane yakho?
Kodwa lapha umjaho kaMendelssohn wadlala, futhi kwafika izinsuku ezinzima zeviki. Ngomama wabantwana abadala, i-metamorphoses iqala ukuvela: uma ingakafiki iphupho lokuthi umshado wengane yabo ujabule futhi isikhathi eside, emva kokubhalisa ehhovisi lokubhalisa, u-70% womkhwekazi wakhe baqala ukwethemba ukuqedwa kwale nyunyana. Ngokuvamile akuyona umbuzo wokunikeza "ingane" yakho ekhulayo nengashadile ithuba lokuhlela ikusasa lakho. Yebo, usemncane kakhulu futhi uthembele! Izingxabano zomndeni nezingxabano zingaholela ekude kakhulu. Futhi umfazi osemusha kufanele acabange ukuthi angayifaka kanjani isimo kuze kube seqophelweni lokungacabangi, okungukuthi, ngaphambi kokuhlukanisa. Ukuze senze lokhu, kudingeka sithole ukuthi empeleni, siqondisa umkhwekazi, futhi sisebenzise amaqhinga afanele.
Uma umamazala noma umkhwekazi ungumbusi wesibindi futhi uyibheka njengesibopho sakhe sokugcina nokuhlaziya yonke imininingwana yokuphila komndeni wengane yakhe, kungcono ukusetha ngokushesha imingcele yobuhlobo, okwenza kucace ukuthi ukungenelela okunjalo okungahambi kahle akuhambisani nawe. Ekuqaleni, ubuhlobo bungaba bubi kakhulu, kodwa-ke bayokwamukela izinga futhi bakhululekile ukuba ulingane. Uma umama womyeni wakho engakunakekeli ngomzuzu owodwa ngokumqoka kwakhe futhi yonke indawo ubeka ikhala, zama ukucasuka. Mqaphele ngokubonga. Ngenhlanhla, umama onjalo uvame ukulula, uthanda ngokuthobeka futhi wamukela ukuqinisekiswa kothando nokubaluleka kokubheka ubuso. Kunenye indlela: umama wakhe uhlale ekhononda ngokuntuleka kokunakekelwa kwakho, uhlale ebuhlungu okuthile, futhi "i-ambulensi" isemsebenzini emnyango wakhe. Lokhu kuyisimo se-emoyeni esivamile esingokomzwelo futhi ulahlekile uma usheshe unqotshwe. With "umama" onjalo kudingeka uziphatha ngokucophelela futhi ngokuthula. Njengomntwana. Uma kungenjalo, ungangena olwandle lwezinyembezi zakhe bese uphazamisa ubuhlobo nomyeni wakhe, oqiniseka ukuthi unina akakwazi ukuqamba amanga. Kunomamazala-"abadlali" abanjalo empilweni yomalokazana wabo. Bamba emasakeni abo nasezinkoneni zeedesksi, bezwa izingxoxo zocingo bese befunda ngokucophelela umbala wokungcola izicathulo zomgwaqo. Ukulwa nabo akunakwenzeka, bayobe beqaphile futhi beyingozi ngokwengeziwe emnyangweni wakho womndeni. Kunengqondo ngesimo esibucayi ukutshela lokhu kumyeni wakhe, okungenzeka uyazi ngezimangalo zikaMama.
Abashadile abasha, abathandekayo nabo, nabo bonke abazithandayo, bangathola ukweluleka ukuba bahlale benomusa futhi bebenomusa. Shiya it elula, kunzima ukukwenza. Kunzima ukuthanda umama womunye umuntu ongakuthandi. Kodwa ngisho nenja iyeka ukukhwaza esihlahleni esasigxuma emoyeni. Manje, swing, ngaphandle kokuzwa noma ukuzwa lokho okungafuni ukuzwa noma ukuzizwa. Gwema izingxoxo ezingathandeki, ungakhulumi amagama angabhubhisa lokho owakhe ngothando olunjalo. Futhi kungakhathaliseki ukuthi uneminyaka emingaki, yiba nesibindi futhi ulungile kakhulu. Ukuba nomona kumyeni wakhe kungukuphela kokufa. Ngakho-ke, myeke amthande ngawo wonke amandla akhe, futhi ahlale eyedwa futhi ehlukile, ekhumbula ukuthi ubusuku busika usuku lwama perekukuet njalo. Gwema isimo sengqondo sakho "somama wakho omusha" futhi ube nabalingani bakhe, kulula ukukwenza, awudingeki nje ukumbiza indawo engcwele endaweni yakhe, kodwa ungamvumeli ensimini yakho.
Imiphumela yephunga emzimbeni womuntu
Uma indoda ingenisa izihlobo nabangane bakhe
I-Psychology of Relations emva kokuzalwa kwengane
Ukuhlaziywa kwesimo sokuxabana kwengqondo
C kunokugqoka isikhumba sesikhumba: izithombe ezipholile ezingu-25 ozithandayo!
Owesifazane Wanamuhla: Umndeni Nebhizinisi
Indlela yokubukeka iyanciphisa isifuba?
Izinongo nama-condiments, kanye nokusetshenziswa kwazo
Inkukhu nama-mushroom ku-multivark
Izimfanelo ezinhle kakhulu zowesifazane
Ukuvocavoca kwabantwana abangaphansi konyaka owodwa ubudala
Ushizi ovela ezinhlanzi